RAZAIMAMONJY CLAUDINE : Miainga indray ny fikafika hitetehana ny fahafahana vonjimaika | NewsMada
Araka ny loharanom-baovao dia efa tsy ao amin’ny hôpitaly intsony ity olona akaiky ny filoha ity.
Mafampana ny eo anivon’ny fitsarana nanomboka omaly. Mandeha be ny resaka amin’izao fotoana izao fa ho avy tsy ho ela ny fangatahana fahafahana vonjimaika ataon-dRazaimamonjy Claudine. Araka ny fantatra dia ampihetsehany avokoa ny tambazotrany rehetra mba hanamora ny fahazoany izany fahafahana vonjimaika izany. Eo anatrehan’izany, miteraka resabe ihany koa ny hoe: mbola ao amin’ny hôpitaly izy sa tsia. Loharanom-baovao maromaro mantsy no milaza fa efa lasa nody eny amin’ny hôtely A&C izy. Eo ampiandrasana fanamarinana mikasika izany amin’izao fotoana izao…
Mbola ho ela vao ho tapitra ity raharaha Razaimamonjy Claudine ity. Manao izay fomba rehetra tsy hidirany eny amin’ny fonjan’Antanimora mantsy ity mpanolontsaina ny filoha Rajaonarimampianina Hery ity. Fantany mantsy fa tsy vahaolana mahomby ny fijanonana ao amin’ny hôpitaly satria na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hiafara eny Antanimora ihany izany, efa mandeha indray amin’izao fotoana izao ny fitadiavany làlana mba ahazahoany fahafahana vonjimaika ary hipetraka tsy ho ela eny anivon’ny fitsarana izany. Mialohan’izay anefa, manao ny fomba rehetra handresena lahatra ny mpitsara izy mba hanome azy izany fahafahana vonjimaika izany. Mitady hiteraka fikorontanana eo anivon’ny fitsarana ity ataon-dRazaimamonjy Claudine ity satria fantatra ny fahafahany, amin’ny fandoavana vola izany. Manoloana ny fielin’ireo resaka ireo, mpiasa eo anivon’ny fitsarana maromaro no manentana ireo namany mba tsy ho latsaka amin’izany mena miraviravy izany. “Mahavita ny zavatra rehetra Razaimamonjy Claudine. Araka ny hitantsika hatreto dia nahavita ny fomba rehetra tsy nidirana teny amponja izy ka azo heverina fa afaka ataony ihany koa ny ahazo ny fahafahana vonjimaika”, hoy ny nambaran’ny mpitsara iray tsy nety nitonona anarana.
Nilaza ihany koa ity mpahay lalàna ity fa hafa mihitsy ny politika mifehy ny resaka ady heloka eo anivon’ny fitsarana. “Fantatry ny mpitsara rehetra izany, ny politika napetraky ny fampanoavana mikasika ny ady heloka, dia milaza fa izay rehetra voarohirohy tamin’ny fanaovana fanodikodinana volam-bahoaka dia tsy maintsy aiditra am-ponja avy hatrany ary tsy mahazo omena fahafahana vonjimaika izany”. Manamarina izany ny alehiben’ny fiampangana azy, “hita ao anatin’ny fehezan-dalàna mifehy ny ady heloka ny mikasika io fandikan-dalàna io”, hoy ihany ny nambaran’ny loharanom-baovao voarainay. Sazy henjana, raha ny andininy faha-169 ao amin’ny fehezan-dalàna famaizana, no miandry izay olona tratra nanodikodina volam-bahoaka. “Na iza na iza mpiasam-panjakana, mpandraharaha tsy tafiditra amin’ny antokom-draharaha nefa manao asa tokony ho anjaran’ny mpiasam-panjakana, mpitsara amin’ny an-kolafiny mikasika ny fanjakana na mikasika ny fitsarana, mpitandraharaham-bahoaka na an’ny minisitera, mpanao Fanjakana, mpiasa na mpandraharahan’ny lafim-pitondram-bahoaka any an-toerana any, mpiasa sy mpandraharahan’ny antokon-draharaha entin’ny Fanjakana, na iza na iza amin’ireo nanafoana, namilivily na nangalatra volam-panjakana na an’olona manokana, na taratasim-pananana mahasolo azy, taratasin-draharaha, taratasim-pizakan-jo, sora-panekena, firaketan-draharaha na izay fananana manaraka hafa rehetra teo am-pelatanany noho ny asa aman-draharahany na teo am-panaovany izany, dia ho faizina hiasa an-tery vozona mandritra ny fotoana voafetra raha toa mahatratra na mihoatra ny 200 000 Ariary ny teti-bidin’ny zavatra nofoanany na naviliviliny na nangalariny”. Amin’ity raharaha Razaimamonjy Claudine ity, ny vola nahodina efa tafiakatra amina miliara maromaro tamin’ny familiana ireo fanampiana manokana tokony ho azon’ireo kaominina avy amin’ny fitondrana foibe. Isan’izany ny kaominina maromaro any Matsiatra ambony sy any Sofia. Manamarika ihany koa ny andalana sasany ao amin’ity andininy faha-169 amin’ny lalàna laharana faha-66-009 tamin’ny 5 jolay 1966 ity far aha toa mihoatra ny 40.000 ariary nefa latsaky ny 200.000 ariary ny vola nahodina na nangalarina dia 2 hatramin’ny 10 taona an-tranomaizina ny sazy. Raha toa kosa ka tsy mihoatra ny 40.000 ariary kosa ny vola nangalarina na nahodina dia 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina ny sazy miandry. Raha toa ka efa tsy voafaritra intsony ireo vola nangalarina na nahodina, asa anterivozona no sazy miandry.
Marina tokoa fa tsy manana toerana ofisialy Razaimamonjy Claudine, nefa tsy afa-miala izy fa manana andraikitra feno amin’ny fiampangana azy ho nanodikodina volam-bahoaka. Ny andalana farany amin’io andininy faha-169 ao amin’ny fehezan-dalàna famaizana io dia mazava fa “afaka ampiharina amin’ny olona rehetra, na tsy manana andraikitra mpiasam-panjakana, nefa isan’ireo nandray anjara tamin’ny fikirakirana ny vola nahodina, izay voatondron’ny andalana voalohany ka nandika izany”. Raha ireo no jerena, tsy azo eritreretina ny mbola ahasahian’ny mpitsara sasany manome fahafahana vonjimaika ity vehivavy mpanao afera akaiky ny fitondra ity, na dia manontona volabe aza iry voalohany. Na izany aza anefa, efa nahazo fampandrenesana avokoa ireo mpikambana rehetra eo anivon’ny fianakaviam-ben’ny mpitsara, ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara, mba heady amin’ny kolikoly sy hamerina indray ny fanjakana tan-dalàna. Miandry, ary tena miandry ny tohin’ity raharaha ity ny rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany…
Lasa aiza Razaimamonjy Claudine
Raha ny tokony ho izy, amin’ny maha-olona tokony ho voatazona am-ponja vonjimaika an-dRazaimamonjy Claudine dia tsy tokony ho afaka hivoaka ny hôpitaly izy hanaraka ny fitsaboana sahaza azy amin’ny aretina, raha tsy hoe hiditra eny amin’ny fonjan’Antanimora amin’izany angaha. Mandeha be anefa ny resaka amin’izao fotoana izao fa efa tsy ao amin’ny efitrano faha-126 intsony izy omaly tolak’andro. Mpiasan’ny hôpitaly maromaro no nahita azy niditra tao anaty fiara fitondrana marary iray hivoaka ny hôpitaly ho any amin’ny toerana tsy fantatra. Io fiara fitondrana marary io izay narahina fiara tsy mataho-dalàna iray izay an-dRazaimamonjy Claudine ihany nivoaka ny hôpitaly. Na dia niezaka nanantona ireo ambaratonga isan-tsokajiny aza ny mpanao gazetinay dia tsy afaka nanamarina mikasika io fandehanana io.